कसरी काम गर्छ स्पेस स्टेशनले ? | गृहपृष्ठ
Home प्रविधि कसरी काम गर्छ स्पेस स्टेशनले ?
on: April 01, 2019 प्रविधि
अन्तरिक्षको विषयमा जानकारीका लागि राखिएको अन्तरिक्ष विमानलाई अन्तरराष्ट्रिय स्पेस स्टेशन (आईएसएस) भनिन्छ । यसलाई पृथ्वीको कक्षमा राखिएको छ । यो अन्तरिक्षमा अध्ययन गर्ने वैज्ञानिकको घर पनि हो । यो फरक किसिमको वैज्ञानिक प्रयोगशाला हो । यो स्टेशनमा विश्वका केही मुलुकले सँगै काम गरिरहेका छन् । आईएसएस पृथ्वीभन्दा २ सय ५० माइल टाढा छ । यो स्टेशन प्रतिघण्टा १७ हजार ५ सय माइल प्रतिघण्टाको गतिमा घुमिरहेको हुन्छ ।
आईएसएसको पहिलो भाग सन् १९९८ को नोभेम्बरमा प्रक्षेपण गरिएको थियो । त्यसको २ सातापछि रूसी कन्ट्रोल मोड्युल प्रक्षेपण गरिएको थियो । त्यसको २ वर्षसम्म यसका विभिन्न भाग पठाइएको थियो । सबै भाग जडान भएपछि यो स्टेशन बस्नयोग्य भएको थियो । पहिलोपटक सन् २००० को नोभेम्बरमा यो स्टेशनका क्य्रू सदस्यहरू पुगेका थिए । त्यसयता मानिसहरू सो स्टेशनमा रहँदै आएका छन् । नासा र उसका सहयोगीले विस्तारै सन् २०११ सम्ममा यो स्टेशन पूर्णरूपमा तयार पारेका थिए ।
कति ठूलो छ आईएसएस ?
आईएसएस पाँचओटा बेडरूम वा बोइङको दुई ७४७ जेटबराबरको आकारको छ । यसको तौल करीब १० लाख पाउन्ड बराबरको छ । यसमा पाँचजना मानिसका साथै अन्य पर्यटक पनि रहनेछन् । यो स्टेशनले एउटा फूटबल मैदानबराबरको क्षेत्र ओगट्ने गरेको छ । आईएसएसमा अमेरिका, रूस, जापान र यूरोपका प्रयोगशाला छन् ।
आईएसएस किन महत्त्वपूर्ण छ ?
आईएसएसबाट अहिले अन्तरिक्षमा हुने गरेका अनुसन्धान यहाँबाट नै हुने गर्छन् । यो स्टेशनमा पहिलोपटक मानिस पठाएपछि अहिलेसम्म मानिस टुटेका छैनन् । आईएसएसको अध्ययनले पृथ्वीका मानिसका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ । दैनिक जीवनको अध्ययनका लागि पनि यसको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । नासा र उसका सहयोगीले कसरी आईएसएसलार्ई राम्रो बनाउने भन्ने विषयमा काम गरिरहेका छन् । नासा अहिले आईएसएसलाई व्यापक विस्तार गर्ने योजनामा अघि बढेको छ । (एजेन्सी)